धनगढीमा सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता गोपाल हमाल #गोपी मेयरमा उदाउदै - Suvham News
धनगढीमा सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ता गोपाल हमाल #गोपी मेयरमा उदाउदै
July 5, 2017 by gsmktm
दुर्गादत्त जोशी / धनगढी—————–
राष्ट्रवादि व्यक्तित्व तथा मौलिक रैथाने व्यापारि कुलिन र सालिन व्यक्तित्वका धनि गोपाल हमाल गोपि ले तपाई हाम्रो सुन्दर सहर धनगढिको मेयर पदमा उमेदवारि दियको तपाई हामिलाई थाह नै छ। धनगढिमा के भै राख्या छ हेर्नुहोस।
देशैभर अग्रता लिएको एमालेलाई पछि पार्दै धनगढीमा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल गोपि अघिपछि गर्दै प्रतिस्पर्धामा आइरहनुभएको छ ।
धनगढीका व्यापारी हमालको ‘दिनेश ग्रुप’ छातामा सबै प्रकारको व्यापार छ । उहाँका जेठा दाजु कालु हमाल टीकापुरमा ‘बनाना किङ’ भनेर प्रख्यात हुनुहुन्छ भने गोपीको दिनेश एग्रो, दिनेश होटल, दिनेश एफएम र दिनेश मोटर्सजस्ता व्यापार छन् । गोपीपछिका दुई भाइ श्याम र देवेन्द्र पनि दिनेश कन्सर्न, दिनेश फोर ह्विल, दिनेश अटो मोटिभ्स, दिनेश मेटल, दिनेश पेन्ट्स, दिनेश कम्प्युटर्सजस्ता व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ ।
हक्की स्वभावका हमालको विकासप्रतिको चाहना र विगतका केही सामाजिक सेवाका प्रयासले उहाँलाई लोकप्रिय बनाएको हो । ‘हाम्रो टोल भएर उहाँको मर्निङ वाक हुन्थ्यो, झिसमिसेमा सडकबत्ती निभाउँदै हिँडेको देखेर बडो रमाइलो लाग्थ्यो’, धनगढीका तारानगरका युवा श्याम पाठकले भन्नुभयो ।
हमालको नेतृत्वमा ०४२ सालमा धनगढीका युवाले ‘ब्लड बैंक’ स्थापनाका लागि स्वरसम्राट् नारायण गोपालको एकल सांगीतिक साँझ गरे भने हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठको त्यतिबेलाको चर्चित ‘विज्ञापन’ नाटक धनगढीमा देखाएपछि रकम संकलन भयो । त्यस रकमले ‘ब्लड बैंक’ नबनेपछि त्यसको आधार हमालको नेतृत्वमा भएको थियो ।
हमालले ०६३ सालदेखि धनगढीमा सुदूरपश्चिम महोत्सवका माध्यमबाट ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लाई स्थापित गर्नुभयो । हरेक वर्षको मंसिर २२ गते त्यो महोत्सव धनगढीमा हुन्छ । त्यसको मुख्य आकर्षण भनेको सुदूरपश्चिमबासीका जति माग हुन्छन्, त्यसको उद्घाटन गर्न आउने व्यक्तिलाई त्यत्तिकै किलोको माला लगाएर सुदूरपश्चिमका मुद्दा सम्बोधन गराउने हो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङजस्ता दिग्गजले २१ बुँदे माग बुझ्दै २१ किलो फूलको मालाको भारी बोकिसकेका छन् । सडक तताउनेभन्दा पनि यो सालीन आन्दोलन पनि उहाँलाई चर्चित बनायो ।
सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे माग र २१ किलो फूलको मालाबाट सुरु भएको उहाँको सुन्दर सुदूरपश्चिमको यात्रा अनवरत चहिरह्यो । ‘यसले सुदूरपश्चिममा छाउपडी छ, हलिया छ, कमैया छ र त्यहाँ अभावै अभाव छ भन्ने कुरा चिरेको छ, यहाँको सम्भावना उजागर गरेको छ’, अर्थविद् शिवहरि मुडभरी भन्नुहुन्छ ।
‘उहाँको अभियानले सुदूरपश्चिम सुन्दर छ र अनि त्यहाँ अथाह सम्भावना छन् भनेर चिनाएको छ ।’
नेपालमै चुनौतीका रूपमा रहेको सिन्डिकेट आन्दोलनको पनि अगुवाइ गरेकाले हमालको राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भयो । ‘सिन्डिकेटको आन्दोलन देशभरि भइरहेको तर गति नदिइरहेका अवस्थामा उहाँले देशभरिका उद्योगी व्यापारीको नेतृत्व गरेर नेपालबाट सिन्डिकेटको अन्त्य गराए’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले भन्नुभयो ।
हमाल जस्तोसुकै समस्यामा पनि नआत्तिने स्वभावका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले हरेक भेटमा नेतालाई सुदूरपश्चिमको विकासका लागि भन्ने गरेको बताउनुभयो । ‘मैले चुनावकै बेला धेरै नेतालाई चन्दा दिएँ, जित्नुस् अनि विकास गर्नुपर्छ भनेँ तर जितेर गएपछि कसैले ध्यान दिएन, त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिएको हँु’, उहाँले भन्नुभयो ।
‘व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन, नेपाली खाडीमा जान बाध्य छन्, जनताले व्यवस्था बदलिएसँगै के पाए त ? त्यसैका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ’, उहाँले भन्नुभयो ।जित्नु र हार्नुसित हमाललाई परवाह छैन । उहाँले उम्मेदवार बनेपछि जनमा लगिएका एजेन्डा स्थापित भए पनि सन्तुष्ट हुने बताउनुभयो । ‘मलाई जित्नु र हार्नुसित कुनै परवाह छैन तर मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि दलका मानिसले दिएको समर्थनले के पुष्टि गर्छ भने अहिले जनता, दलका कार्यकर्ता पनि विकास र आर्थिक समृद्धि चाहन्छन्,’ हमालले भन्नुभयो ।
कैलालीको टीकापुरमा जन्मिएका हमाल ४ वर्षको छँदा धनगढी आउनुभएको हो । धनगढीमा ५ हजारबाट सुरु गरेको उहाँको व्यापार अहिले अर्बौंमा पुगेको छ । ‘पाँच हजारको लगानीको व्यापार, व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यस्तो हुन सक्छ भने जितेर गएपछि विकास किन गर्न सकिँदैन ? मलाई यही लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा कहिल्यै पनि दललाई गाली गर्नुभएन । ‘एक भोट विकासलाई ६ भोट दललाई’ भन्ने नारा बनाएर दलका लागि पनि भोट माग्नुभयो । ‘म लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्मान गर्ने मान्छे हुँ, मलाई थाहा छ, गणतान्त्रिक मुलुकमा दलको विकल्प पनि छैन तर दलमा भएका नेताले जितेर गएपछि जनताको काम किन गरिदिन्नन् ? ‘ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
धेरै, उहाँलाई मण्डले भन्छन् तर हमाल अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता नलिएको बताउनुहुन्छ । ‘मैले अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता लिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो । तर, उम्मेदवारी दिने थाहा पाएपछि मलाई हाम्रो पार्टीबाट लड्नुस् भन्नेहरू दैलोमा आएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । हमाललाई जातीय र भेगीय भेदभावले दुखित पार्छ । उहाँविरुद्ध चुनावमा पनि ‘कपास’ को नारा लगाइयो । कपास भनेको कर्णालीपारिको समाज ।
‘सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाभन्दा बाहिरबाट धनगढीमा बसेकालाई जातीय राजनीति गर्नेले कपास भन्ने गर्छन् । ‘तर म कवास (कर्णालीवारिको समाज) हुँ । म सुदूरपश्चिममा जन्मिएँ, सुदूरपश्चिममा हुर्किएँ, मेरो व्यापार सुदूरपश्चिममै छ, मलाई थाहा छ जबसम्म सुदूरपश्चिमको विकास हँुदैन तबसम्म मेरो वा सुदूरपश्चिमवासीको विकास हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
गोपी स्वभावका कारण पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ । ‘गोपीले झुटो बोल्दैन, आँटेको काम गरी छाड्छ, परिस्थितिको सटीक विश्लेषण गर्ने क्षमता छ । भोलिको प्लान बनाउन सक्ने क्षमता छ’, उहाँको प्रचार प्रसारमा लागेका नेपाल अनुसन्धान विभागबाट सेवानिवृत्त डीएसपी दानबहादुर रावलले भन्नुभयो।
दललाई हम्मेहम्मे पारेका हमालले पार्टीभित्रको गुटबन्दीको फाइदा लिएको एमालेका मेयर उम्मेदवार दुर्गा जोशी बताउनुहुन्छ । ‘गोपीजीले दलहरूभित्रको गुटबन्दीको फाइदा उठाए, कांग्रेसका धेरै नेता त खुलेरै उहाँको पक्षमा लागे, एमालेमा बाहिरी अनुशासन त देखियो तर भित्रभित्र उहाँलाई सघाए’, जोशीले भन्नुभयो ।
कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार नृपबहादुर ओड पनि हमालले पार्टीको गुटबन्दीको फाइदा उठाएको बताउनुहुन्छ । ‘मेराविरुद्ध वडा-वडामा बागी उम्मेदवार उठे, हमालले तिनैलाई समातेर त्यो मत आयो’, ओडले भन्नुभयो ।
Tagged सुन्दर सुदूरपश्चिम
Prevजरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति
Nextसी के राउत र एक मधेश एक प्रदेश भन्नेलाइ चेतावनी :-